Iinkqubo zokuSebenzisa iikhamera zomzimba eziWelwayo | Izisombululo ze-OMG
Iinkqubo zokuSebenzisa iikhamera zomzimba eziWelwayo
Ikhamera enxibe umzimba iye yaveza indlela yayo kwii-arhente zokunyanzeliswa komthetho uluhlu lwezixhobo eziluncedo, emva kokuvavanywa kweekhamera kunye nokuzisebenzisa kwimithambo kunye novavanyo lokuqhuba, kuye kwakho esi sivumelwano malunga noko; Kubaluleke kakhulu ekugcineni iintlobo ezithile zolwaphulo mthetho kumagosa omthetho kunye nakubemi. Ayizindaba ukuba iikhamera ezinxibe umzimba zifumene ingqalelo enkulu ingakumbi zii-arhente zokunyanzelwa komthetho. Amagcisa kwi-arhente yokunyanzeliswa komthetho anike ingcinga enzulu kwizinto ezinkulu ezinokubakho ukuze umntwana amkhulise. Inkqubo yekhamera enxibe umzimba ijongwa njengendlela yokwandisa ukuphendula, ukwenza izinto elubala kunye nobudlelwane phakathi kwamapolisa noluntu (ubudlelwane obungebuhle njengabantu baseburhulumenteni abawathandi amapolisa).
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, itekhnoloji enika ubonelelo ngeenyawo ayizange iqale ukubakho kwi-21st yenkulungwane. Kwi-90 yokuqala, kukho ukusetyenziswa ngokubanzi kweekhamera zedashboard ezazisetyenziselwa ukurekhoda ukungavisisani okanye nantoni na eyenzekayo phakathi kwamagosa kunye nabemi ngelixa bejikeleza. Nangona kukho ukwaliwa kwasekuqalekeni kolo lwazi, amagosa ayephambene nalo uninzi lwabo bengafuni “mzukulwana omkhulu” njengoko babeqhele ukuthumela ikhamera emva koko. Kodwa njengoko ixesha lihamba, kwabakho ukunyuka kwamatyala apho abahlali babetyhola amagosa ngezinto ezininzi, oku kubandakanya ikakhulu ukusetyenziswa okunganyanzelekanga kwamandla ukuphatha amatyala. Kungekudala amagosa aqala ukwamkela iikhamera zedashboard kwaye kungekudala kwamkelwa ngokubanzi. Ngelo xesha, umabonwakude ojikelezayo (CCTV) wayefumana umhlaba kwaye eluncedo ngokulula ekusombululeni amatyala ngokulula nangamaqhosha amaninzi obungqina. Kwakhona, ukwenziwa kwe-smartphone yayisele inika wonke umntu ikhamera, nabani na unokuthatha iifoto nangaliphi na ixesha nangomntu okanye nantoni na. Phambi kokuba abantu kwakudala abanee-smartphones babezisebenzisa ukurekhoda amapolisa xa esemsebenzini, oku kwenza ukuba kunyanzeleke kwaye kufanelekile ukuba amagosa abenobuchwephesha bawo bokujonga. Kuphando olusanda kwenziwa e-US, kwafunyaniswa ukuba uninzi lwabemi luvumile ukusetyenziswa kwekhamera enxibe umzimba. Isixhobo abasamkelayo nesasivunyiweyo senzelwe ukuvunywa.
Ukwanda kokufumaneka kunye nokwamkelwa kwiinkqubo zetekhnoloji kuzisa imiceli mngeni, omnye umba ubandakanya; xa ukurekhodwa kunokuthathwa, imigangatho ekufuneka ifikelelwe ukuze idatha igcinwe kuze kusetyenziswe kuyo, ichaze kunye nolungelelwaniso lwayo lwexesha elizayo nge-geotagging (GPS) kunye nobuchwepheshe bokubona ubuso. Nangona kunjalo, abanye abantu baxoxa ukuba iindleko zokusebenzisa le nkqubo zichaphazela ngokwenene izibonelelo zayo ngenxa yoko ithatha isigqibo sokuyisebenzisa okanye ukuyamkela. Kolu bhalo sinethemba lokubonelela ngesikhokelo kuyo nayiphi na into enokuthi uluntu lukhethe ukuhambisana netekhnoloji, ngalo mthetho ubekiweyo siyakuphepha ukuxoxa ukuba ngaba inkqubo ayamkelwa na okanye hayi. Sijonga ukujonga imigaqo-nkqubo eyimfuneko ukuze uluntu lusebenze kakuhle nokukhusela amalungelo oluntu. Eminye imicimbi ekufuneka iqwalaselwe lisebe zezi:
Iziphumo zocalucalulo, zombini xa unxibelelana nabahlali kunye neearhente zokunyanzelwa komthetho
Iingxaki zabucala zamagosa kunye namalungu oluntu
Iziphumo zokuziphatha kukawonke-wonke kunye noluntu ngokubanzi
Yenza ithuba loqeqesho lwamapolisa
"Ividiyo ikhethe" ngejeli kunye nesebe lamapolisa
Ifuna indlela yelungiselelo, oku kubandakanya abasebenzi kunye nendleko zemali zokuqhuba le nkqubo.
Nangona kunjalo, iikhamera ezinxibe umzimba aziyiyo ipanacea. Ukuwasebenzisa ngaphandle kwemigaqo-nkqubo elungileyo ngokwaneleyo yokuwaxhasa kungakhokelela kwisiphazamiso esikhulu kwiiarhente zokunyanzeliswa komthetho kwaye banenjongo yokusebenza. Phakathi kokuxhalabeleyo yimpembelelo enokubakho kuluhlu olubanzi lwexabiso lomgaqo-siseko kunye namalungelo. Ngokuhambelana, iiarhente kufuneka zivavanye izibonelelo kunye nokungalunganga okuziswa yikhamera yomzimba xa kuthathwa isigqibo malunga nokuba zingaphunyezwa njani na ukuze zilungele uluntu olukhulayo kunye nokuvela. Sizama ukujonga imicimbi ethile enokuthi ijongane neearhente zokunyanzeliswa komthetho kunye noluntu xa luzama ukusebenzisa ikhamera enxibe umzimba. Ikomiti yeprojekthi yomgaqo-siseko yotshintsho lwamapolisa inikezela ngezindululo ezithile nangona ikholelwa ukuba zingasetyenziselwa ukusombulula okanye mhlawumbi ukunciphisa le micimbi ngakumbi. Ezi ngcebiso zishwankathelwe apha ngezantsi ngolu hlobo lulandelayo:
Iikhamera ezinxibe umzimba kufuneka zisetyenziselwe ukuqhubela phambili injongo echazwe ngokucacileyo kunye necacileyo, akufuneki ukuba isetyenziselwe umsebenzi wasekhaya okanye umntu ongengobuchule kwimicimbi enxulumene nomsebenzi engahambelaniyo.
Abaqulunqi bomgaqo-nkqubo kufuneka babe nentetho yokuhlala phantsi nabasebenzi abasebenza ngomthetho njengoko iikhamera ezinxibe umzimba zisenziwa ukuze zisetyenziswe kwindawo ephantsi kolawulo lwabo.
Abaqulunqi bomgaqo-nkqubo kufuneka basebenzisane noluntu kwaye babe nesivumelwano kunye nabo malunga nemithetho abavumayo nendlela eya kulawula ukusetyenziswa kwekhamera enxibe umzimba.
Umgaqo-nkqubo ocaciswe kakuhle kufuneka ube necandelo elibandakanya udidi lwesiganeko ukurekhoda okanye unokuthi imeko yonke enxulumene nomsebenzi irekhodwe.
Amagosa kufuneka akwazi ukuphuma ecocekile kwaye axelele abahlali ukuba arekhodiwe, banelungelo lonke lokwazi ukuba izenzo zabo ziyarekhodwa nangaliphi na ixesha
Nje ukuba umhlali acele ukurekhodwa, igosa kulindeleke ukuba liyeke ukurekhoda kwangoko.
Imigaqo-nkqubo kufuneka ichaze ngokucacileyo ukuba igosa linyanzelekile ukuba lenze ntoni malunga nokurekhoda, kunye neso sohlwayo esinokufezekiswa ngokuchasene nokophula imigaqo-nkqubo.
Ukugcinwa kwedatha kunye nokusetyenziswa kwedatha
Namphi na ividiyo eye yaphononongwa kwaye yaqinisekiswa ukuba inobungqina kufuneka igcinwe ikhuselekile kwaye igcinwe. Iividiyo ezingangqinelaniyo zinokucinywa emva kwexesha elithile.
Ikhonkco lobungqina lobugcini kufuneka ligcinwe kakhulu kwaye likhuseleke kwaye libhalwe phantsi.
Ukufikelela kwegosa kwiividiyo kufuneka kube kunqongophele kwaye xa benikwa ukufikelela kwezi vidiyo, imisebenzi yabo yelogi kufuneka ilandelwe kwaye irekhodi kufuneka yenziwe.
Emva kokubhala ingxelo yokuqala, amagosa makavunyelwe ahlole ukurekhoda kwawo njengoko oko kunokubanceda ukuba bakhumbule izinto eziza kongeza.
Imigangatho yokhuseleko lwedatha efanelekileyo kunye neengcali ze-cybersecurity kufuneka ziqeshwe ukugcina le datha ukuba ingafikeleleki ngendlela engafanelekanga ngeendlela ezikude nakwiwadi yokuqhekezwa ngokukhohlakeleyo.
Inkqubo yokuphicothwa esebenzayo kufuneka ifikeleleke ngokungafanelekanga okanye ukuphazamisana neefayile zedatha.
Ukusetyenziswa kwetekhnoloji ithegi kufuneka incitshiswe kakhulu kwaye ukuba kufuneka yenziwe, kufuneka kugunyaziswe isemthethweni
Nanini na xa ukwabiwa korhulumente kukarhulumente nangawuphi na umba wokubhalwa kweenyawo kusenziwa, kuya kufuneka ukuba iqumrhu elamkelayo liqeshe imigaqo-nkqubo ekhokela icandelo lokwabelana ngenjongo yokuphepha ukungqubana.
Ukufikelela kweenkcukacha zoluntu
Nanini na xa umntu othile efakwe kumdlalo wevidiyo ethile, baya kuvunyelwa ukuba baphinde bayijonge loo vidiyo kuba bavela kuyo banelungelo elipheleleyo lokuyibona kwaye baphinde bajonge kwakhona
Ukukhuphela ividiyo njengesicelo serekhodi kawonkewonke kufuneka kuvunyelwe ngokubanzi ukwenziwa.
Ngelixa ukhulula ividiyo ihambelane nenkundla eqhubeka enkundleni kubaluleke kakhulu ukuba ilandela wonke umthetho wobungqina.
Uqeqesho oluchanekileyo kufuneka linikezwe kwigosa ngalinye eliza kunikwa ikhamera yomzimba, kufuneka likwazi ukusebenzisa isixhobo kakuhle.
Amagosa asebenzisa ikhamera yomzimba kufuneka afundiswe ukuba angayifaka njani kwakhona idatha yakhe ukuba oko kubandakanya ukwenza njalo ngelixa kufakwa ingxelo yokuqala.
Igosa kufuneka lilungiswe kakuhle kwaye liqeqeshelwe malunga nemigaqo-nkqubo yabucala kunye nendlela yokuphepha ukuthintela ukwaphula iingxaki.
Ubukho bemigaqo-nkqubo kunye notshintsho
Yonke imigaqo-nkqubo enxulumene neekhamera ezinxibe umzimba kufuneka ibe yimithetho ebhaliweyo kwaye uninzi lwayo lufumaneke eluntwini, ikhamera yomzimba ifikelela kuwo onke amagosa nakubantu abasebenzayo. Abemi banelungelo lokuyazi imigaqo-nkqubo ekhokelela kwizixhobo abazamkelayo zinokusetyenziselwa ukwenza uluntu lube ngcono nokunceda amapolisa kwimisebenzi yabo.
Umnyango kufuneka ulungele ngalo naliphi na ixesha ukujonga imigaqo-nkqubo kunye nokutshintsha izinto amaxesha ngamaxesha kunye negalelo loluntu kunye nokwazisa kwabo ngalo lonke utshintsho olwenziweyo.
Imigaqo-nkqubo efanelekileyo ngokubambisene nenkxaso mali
I-federal yenkxaso-mali kufuneka ixhomekeke ekuphunyezweni kwemigaqo-nkqubo ethile kunye nesebenzayo eqinisekisa ukusetyenziswa ngokukhuselekileyo kunye nokukhusela imicimbi yolwaphulo-mthetho lwangasese.
Ukuqukumbela, akukho mthetho ucacileyo naphi na othi ikhamera enxibe umzimba kufuneka yamkelwe okanye ingavunyelwanga, lonke igunya linokuzikhethela ukuba bayayifuna kwaye baya kusazi ngokuqinisekileyo ukuba kutheni beyenza oko. Kukholelwa ukuba imimandla eye yamkela ukusetyenziswa kweekhamera ezinxibe umzimba ngokulandela ezi zikhokelo zingasentla iya kuqinisekisa ukuba le nkqubo ixhasa amalungelo omgaqo-siseko kunye nexabiso, elibaluleke kakhulu kuluntu lonke
1401 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-4 Namhlanje